‘Musatye kutaridza zvipo zvenyu’ | Kwayedza
‘Musatye kutaridza zvipo zvenyu’
08 Mar, 2019 - 00:03	 2019-03-07T17:34:39+00:00 2019-03-08T00:05:08+00:00 0 Views
Tatenda Shuro naAshley Muchamiri
MUIMBI wemisambo yakasiyana inosanganisira mbira, reggae, mbakumba, mhande nechitendero – Tinashe Mubondera – uyo vazhinji vanoziva saTinashe Wembira anoti akakura mumhuri inonamata uye pakutanga aitya kutaridza chipo chake achifunga kuti aizonzi ari kuita zvemashave echivanhu izvo zvinopesana nechinamato chemhuri yake.
“Mukukura kwangu, ndakatanga kuridza mbira ndine makore 16 ekuberekwa asi ndaitya kuti zvizivikanwe kumba ndichitya kunzi ndezvemashave sezvo mhuri yedu iri yevanhu vanonamata.
“Zvakazotambirwa hazvo kumba uye ichi chidzidzo chandinoda kupa kune veruzhinji kuti ngavatsigire vana vavo pane zvese zvavanoita,” anodaro.
Muimbi uyu – uyo akwanisa kutsikisa nziyo nhanhatu kusvika parizvino – anoti akadzidzira zvemimhanzi kuZimbabwe College of Music.
Panziyo idzi, dzine mukurumbira ndedzinoti Vavarira naMwana Wamambo.
“Zvokuimba ndakadzidzira paZimbabwe College of Music muna2015 ndichangopedza zvidzidzo zveA- Level ndipo pandakangotanga hangu kuita zvidzidzo zvekuridza mbira,” anodaro.
Tinashe Wembira anoti akatanga kuimba ari muchikwata cheTraditional Avenues Band ari kuchikoro apo pakaumbwa tarenda rake.
“Ndiri kuchikoro, taive nechikwata chedu chainzi Traditional Avenues Band chinove ndicho chakandivaka ndikabikwa tarenda rangu rokukwenya mbira.
“Muchikwata ichi, ndimo mandakadzidza kuti sevaimbi tinofanirwa kubatana uye kushanda pamwechete kana tichida kusimuka,” anodaro.
Muchinda uyu – uyo akazvarirwa kwaMutare ndokuzouya kuzogara muHarare mugore ra2015 – anoti mhanzi yake ndeyerudo inodzidzisa vanhu kuti vave nerudo uye vagare zvakanaka munharaunda.